Nepali Rajneeti | परदेशको खाडीमा श्रीमान ,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा आयो नसोचेको जवाफ सबै परे चकित
परदेशको खाडीमा श्रीमान ,नेपालमा श्रीमती गर्भवती !! कसको बच्चा भनेर सोध्दा आयो नसोचेको जवाफ सबै परे चकित
बैसाख ३०, २०७८ बिहिबार ५२८ पटक हेरिएको
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो ।
ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ । तब सम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि गर्भवती भइन् । जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन्।
तर, जब सम्पूर्ण परिवारलाई यो थाहा भयो, ती महिलाले भनिन् कि यदि तपाईले मलाई घरमा राख्न चाहानुहुन्छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म तिमीलाई केही झुठो केसमा फसाउनेछु। तर यस धम्कीको कुनै असर भएन र परिवारले त्यसलाई घरमा राख्न मानेन ।******** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस********
कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका सदस्यले महिलालाई साथमा राख्न अस्वीकार गरेपछि पञ्चायत बसे । त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी गर्भवती भइन् ।पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन्